Ihe dị mkpa ka ị na-elekọta n'ihu gị dochie draịvụ ike gị
A ike mbanye bụ kọmputa data ụlọ ahịa ie ya nwere niile data chọrọ maka kwesịrị ịrụ ọrụ nke na kọmputa gị nakwa dị ka data na ị nwere ike Ọzọkwa echekwara na ya dị ka music, foto na vidiyo. Tupu dochie a ike mbanye, a nile data ga-mkpa kwadoo ebe ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-ama anọwo na-eme backups ị ga-mkpa ịkpali ndị a backups a dị iche iche anụ ahụ ọnọdụ kama ime ka ha na-anọ na otu ike mbanye. Ọ bụrụ na Otú ọ dị, ị na-aja nke a na-emezughị ike mbanye na mkpa naghachi gị data, ị pụrụ ime ka ojiji nke ngwá ọrụ dị ka Wondershare Data Iweghachite, Recuva na PC soja wdg iji weghachite niile na data maka gị. Ozugbo i mere n'aka na niile bara uru data e natara na bụ nchebe, ị nwere ike anọgide na-eji ike mbanye nnọchi usoro.
Ịhọrọ ọhụrụ ike mbanye
Data na Ike Connector iche
Ọhụrụ ike mbanye na ị na-eme atụmatụ na ịzụ kwesịrị inwe otu data na ike njikọ ụdị dị ka ị gara aga ndị mere na ọ pụrụ mmasị gị na kọmputa ma ọ bụ na laptọọpụ. Ịzụ onye na dị iche iche nke Njikọ ga na ike a nnukwu ọgbaghara n'ihi na ị ma na ị pụrụ ịdị mkpa ka dochie na otu e mesịrị na.
Ikike, Speed ​​na a pụrụ ịdabere
Atọ n'ime ihe ndị kasị isi e ji mara na a ga-nọ n'uche mgbe ịzụrụ a ọhụrụ ike mbanye bụ ikike, ọsọ na pụrụ ịdabere. E a dịgasị iche iche nke nhọrọ ịhọrọ site na kama ị ga-ịzụta otu nke bụ kasị mma ruru eru gị mkpa. Ọ bụrụ na ihe atụ, ikike abụghị isi nchegbu ma i nwere ike na-emebighị na ọsọ na pụrụ ịdabere, ịzụta a ike mbanye nke ga-njinji gị mkpa maka ngwa ngwa data transfer ọsọ na pụrụ ịdabere.
Eduzi dochie ike mbanye na PC
Ikwụpu gị CPU si ileba anya na ndị ọzọ na elu na ngwaọrụ na wepụ ọ bụla eletriki njikọta si ha na nwoke plọg. Mepee ikpe nke CPU site unscrewing kposara ma ọ bụ ịpị lash ọ bụrụ na gị CPU bụ na-enweghị kposara.
Chọpụta draịvụ ike gị ma mata njikọta. Ikwụpu njikọta si njikọ nke ọma.
Ihighari kposara na e ji ka ịgbakwunye ike mbanye na onu n'ime kọmputa ikpe. Jiri aka gị jide ike mbanye bụrụ na e nweghị ọzọ nkwado ịkwụsị ya falling ọzọ karịa kposara.
Mia ike mbanye nke onu na mgbe ahụ slide na ọhụrụ gị ike mbanye. Nlezianya na-etinye kposara azụ na na itinye njikọta ka ha na nwoke njikọ. Ebe ahụ ikpe azụ na iji kposara ma ọ bụ latches.
Eduzi dochie ike mbanye na laptọọpụ (windo)
Gbanyụọ gị na laptọọpụ na-ewepụ ndị batter ozugbo laptọọpụ bụ anya. Iji a ịghasa ọkwọ ụgbọala, wepụ kposara ejide ike mbanye n'ọnụ mmiri. Ị nwere ike ịchọta ndị ike mbanye n'ọnụ mmiri site achọ akara ngosi marking n'ọnụ mmiri.
Ọ bụrụ na ndị ike mbanye na jikọọ na a sled, wepụ kposara na-ejide sled na mgbe ahụ Mia ike mbanye si. Ọ bụrụ na ndị ike mbanye na-nwetara ka laptọọpụ onwe ya Otú ọ dị, ihighari kposara ejide ya na mgbe ahụ na-ike mbanye si. Na-elekọta ka gaghị emebi ọ bụla nke njikọ ya.
Ebe ọhụrụ ike mbanye n'ime oghere hapụrụ efu site nke ochie ahụ. Slide ya azụ na ọ bụrụ na ị adara aga na otu onye ma ọ bụ na-edebe ya azụ ke oghere na eriri kposara ma ọ bụrụ na gara aga otu e mmasị ka aru nke Onye-igwe. Ma ụzọ, ọhụrụ ike mbanye kwesịrị fir na n'ụzọ kwesịrị ekwesị na draịvụ ike n'ọnụ mmiri ma njikọta na kwesịrị-ekwesị ejikọrọ.
Ebe ahụ ike mbanye n'ọnụ mmiri ụzọ azụ na itinye na kposara.
Eduzi dochie ike mbanye na Mac (MacBook na iMac)
Dochie draịvụ ike na Mac
Tụgharịa gị Mac-ewepụ ihe niile na kposara attaching azụ panel aka ahu nke igwe. Wepụ azụ panel ma na-ezi anya n'ime.
Chọpụta ike mbanye n'ime Mac. Ke ndise gosiri n'elu, ọ na-emi odude ke ala ekpe akuku na a na-ebe site 4 kposara. Ikwụpu kposara ejide ala ike mbanye na ebe-eji a ịghasa-akwọ ụgbọala. Ịkwụpụ ya na njikọ na-ewepụ posts na n'akụkụ nke ike mbanye.
Were ọhụrụ gị ike mbanye na nkwụnye ọ na njikọta na ochie ike mbanye e mbụ jikọọ na achọ ya na ebe. Jide n'aka na ọ na-anọdụ n'ụzọ zuru okè ma ọ dịghị ihe bụ nke iji. Dochie azụ cover na scree ya azụ na ọnọdụ.
Dochie draịvụ ike na iMac
iMacs-kpọmkwem ike na-emeghe esighịkwa ha compactness na nri. Ọ bụrụ na Otú ọ dị, ị na-kpebisiri ike dochie ike mbanye na otu onwe gị, na-aga na na-eso ntụziaka ndị a:
Ịchọta na wepụ Ram oghere.
Wepu iko n'iji osisi na-na ngwá ọrụ.
Wepụ eku site na iwepu niile kposara na n'ihu n'akụkụ nke iMac.
Wepu ihuenyo site na mbụ wepụ kposara na mgbe ahụ un-ịkwụnye niile njikọ nke igwe na ihuenyo.
Chọpụta na diski ike na-ewepụ ndị SATA na ike njikọ ya. Un-ikwunye ndị ọzọ nile njikọ na free na diski ike site n'ịgba nwa ahụ ndokwasa ke achụpụkwa gị. Ugbu a ebe ahụ ọhụrụ diski ike na ya na ebe, efego ya azụ, na itinye niile njikọta na kposara.
Nlezianya ebe azụ ihuenyo, eku, na iko na ROM oghere na ị na-ọma na-aga.
Ihe ị chọrọ ime mgbe dochie diski ike gị
Anwale a ọhụrụ ike mbanye bụ mgbe oké ụzọ mara ma ọ bụrụ na ike mbanye wee na ụfọdụ kpatara na-adịghị anya n'ihi na ụfọdụ ihe. Otú a ị nwere ike ịlaghachi ya ndị na-ere ma na-a ike nnọchi mere na ị na-adịghị na-ata ahụhụ mgbe e mesịrị na. Iji nwalee a ike mbanye, mfe ihe na-eme ga-abụ idetuo a otutu data na ya na mgbe ahụ idetuo na data azụ ebe dị iche. The data nwere na-nnukwu mere na draịvụ ike nwere ike n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-anwale. Rịba ama okpomọkụ nke ike mbanye site emetụ azụ panel nke gị na laptọọpụ mgbe ọ na-agba agba fọrọ nke nta ka otu awa. Ego maka noises ma ọ bụ ịpị. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla yiri ka iberibe, na-akọ nsogbu ozugbo ka na-ere.
Ụzọ kasị mma iji weghachi data site na ide Draịvụ
> Resource> Draịvụ> The kacha ndu dochie gị ike mbanye